﻿	၁ မိနစ်အတွင်းမှာလွယ်ကူသောချောကလက် Mousse - ချက်ပြုတ်နည်းများ
လွယ်ကူသောချောကလက် Mousse ... ဆယ်စုနှစ်နှင့်ကြွယ်ဝသော! သင်ကပါဝင်မှု ၃ ခုသာအသုံးပြုသည်ကိုသင်မယုံနိုင်၊ တစ်မိနစ်တောင်မပြည့်မီဗီရိုမှစားပွဲသို့သွားသည်။
ငါအကောင်းကိုချစ်တယ် ချောကလက်အချိုပွဲ နှင့်ဤချောကလက် Mousse တစ်ချိန်တည်းမှာအားလုံး decadent နှင့်ကြွယ်ဝသောနှင့်အလင်းသည်! ဤသည်လွယ်ကူသောဗားရှင်းလုံးဝအားထုတ်မှုကြွယ်ဝခြင်းနှင့် fluffy ချောကလက် mousse စေရန်ဖြတ်လမ်းယူ။
ဂန္တ ၀ င်ချောကလက်အချပ်များသည်ချက်ပြုတ်ရန်၊ အအေးခံရန်၊ ခြစ်ရာကနေစစ်မှန်တဲ့ချောကလက် mousse နဲ့တူအတော်လေးဘာမှမရှိဘူးရှိပါတယ်နေစဉ်, တခါတရံတွင်သင်ရုံမြန်ပြီးလုံးဝအားထုတ်မှုအချိုပွဲလိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကဒါပါပဲ။
ပါဝင်ပစ္စည်းသုံးမျိုး။ တစ်မိနစ်။ ပြီးပြီ
Chocolate Mousse ဆိုတာဘာလဲ။
ခြစ်ရာကနေချောကလက်Мусများအားများသောအားဖြင့်အနံ့အရသာရှိသောကြက်ဥအဖြူနှင့် / သို့မဟုတ်လေးလံသောမုန့်မှပြုလုပ်သည်။ ဒါဟာချောကလက်နှင့်အတူအလင်းနှင့် fluffy နှင့်အရသာသည်အထိရိုက်နှက်ရဲ့ (ဒါပေမယ့်သူကအရမ်းအရသာရှိနိုင်ပါသည်) ။
ဤလွယ်ကူသောချောကလက်မုန့်သည်ချက်ချင်း pudding ရောစပ်ခြင်းဖြင့်တစ်မိနစ်မျှသာကြာသည်။ ကိုကိုးအမှုန့်ကအရသာပိုများစေပြီးဒီချောကလက်ကိုပိုမိုချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်စေသည်။
ဒီအမြန်ချောကလက်မုန့်စာရွက်ကိုလုပ်တဲ့အခါမှာသင်ဟာကြာရှည်ခံမယ့်မုန့်ကိုမအောင်အောင်မြင်မြင်မလုပ်မိစေဖို့ဂရုစိုက်ဖို့လိုလိမ့်မယ်။ ၎င်းသည်အလွန်လျှင်မြန်စွာထူသောကြောင့်သင်၎င်းကိုစောင့်ကြည့်ပါလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တွင်များသောအားဖြင့်လှပသောအိတ်များ သုံး၍ မျက်မှန်များသို့မဟုတ်အိုးများသွားရန်အဆင်သင့်ရှိသည်။ သင်ကြိုက်နှစ်သက်ပါကသင်ရုံပန်းကန်ထဲသို့ဇွန်းထည့်နိုင်သည်။
ဒီရိုးရှင်းတဲ့အချိုပွဲကိုလှပအောင်လုပ်ဖို့အတွက်ငါကမုန့်အနည်းငယ်ကိုချွတ်ပြီးအမြှုပ်ထနေသောထိပ်ဖျားနဲ့စတော်ဘယ်ရီတစ်ခုခုကိုထည့်လိုက်တယ်။ ငါလက်ထဲမှာချောကလက်ဘားတစ်ခုရှိနေရင်၊ ငါထပ်ခါထပ်ခါချောကလက်စားရန်ဒိန်ခဲ grater ကိုသုံးလေ့ရှိသည်။ ကြည့်ရတာအရမ်းကောင်းတယ်
Mini Cheesecakes - ပါတီအကြိုက်ဆုံး
အဘယ်သူမျှမ Bake ဒိန်ခဲ Parfaits! - လတ်ဆတ်သောအသီးကိုပေါင်းထည့်ပါ !!
သင်၏အိုးများဖုံးအုပ်ထားပါကဤအချိုပွဲသည်ရေခဲသေတ္တာထဲတွင် ၃-၄ ရက်ခန့်နေသင့်သည်။ ငါသခင့်အတွက်ရိုက်နှက်သောမုန့်ကိုထည့်မယ်၊
ဤလွယ်ကူသောစာရွက်ကိုကိတ်မုန့်အဖြစ်လည်းအသုံးပြုနိုင်သည်။ ကိတ်မုန့်အဆာတစ်ခုဖန်တီးရန်၊ လေးလံသောမုန့်ကို ၂ ခွက်အထိလျှော့ချပြီးညွှန်ကြားထားသည့်အတိုင်းကျန်စာရွက်ကိုလိုက်နာပါ။ ၎င်းသည်အလွန်လွယ်ကူပြီးသင်လုပ်သောကိတ်မုန့်ပေါ် အခြေခံ၍ သင် pudding ၏အရသာကိုအစားထိုးနိုင်သည်။
ဝက်ပေါင်ခြောက်နှင့်ဒိန်ခဲ frittata စာရွက်မီးဖို
သင့်ရဲ့ guests ည့်သည်တွေကဒီအချိုပွဲကိုလုံးဝသဘောကျသွားမှာပါ။
ပြင်ဆင်ချိန်နှစ် မိနစ်များ ချက်ပြုတ်ချိန်0 မိနစ်များ စုစုပေါင်းအချိန်နှစ် မိနစ်များ ဝန်ဆောင်မှု၄ စားသုံးခြင်း စာရေးသူHolly Nilsson ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရန်မိနစ်အနည်းငယ်မျှသာကြာသောကြွယ်ဝသောချောကလက်အချိုပွဲတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပုံနှိပ်ပါ ပင်
▢၁ သတျတော လက်ငင်းချောကလက် pudding ရောနှော4အမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်အရွယ်အစား
▢နှစ် ဇွန်း မချိုသောကိုကိုးအမှုန့်
▢2 ½ ခွက် ခရင်မ်လေး 30-35% mf
▢၁ ခွက် ထိပ်ဖျား မလုပ်မနေရ
ကြာပွတ်မုန့်ကိုထည့်ပြီးအလယ်အလတ်မြင့်မားသောလျှပ်စစ်မီတာဖြင့် ၁ မိနစ်ခန့်ရောမွှေပါ။
သင်၏ကြက်များကိုကြာပွတ်နှင့်အတူသစ်သီးများ၊ သစ်သီးများ၊ ပူစီနံသို့မဟုတ်ကြာပွတ်မုန့်များနှင့်အလှဆင်ပါ။
သော့ချက်စာလုံးချောကလက် mousse သင်တန်းအချိုပွဲ ချက်ပြုတ်ခဲ့သည်အမေရိကန်© SpendWithPennies.com ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများနှင့်ဓာတ်ပုံများသည်မူပိုင်ခွင့်နှင့်ကာကွယ်ထားသည်။ ဤစာရွက်ကိုမျှဝေခြင်းကိုအားပေးပြီးတန်ဖိုးထားသည်။ မည်သည့်ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုမဆိုချက်ချင်းကူးယူခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ကူးယူခြင်းများကိုလုံးဝတားမြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ဓာတ်ပုံအသုံးပြုမှုမူဝါဒကိုဒီမှာကြည့်ပါ ။
Eyeball Pasta (ဟယ်လိုဝင်းညစာစားပွဲဆိုင်ရာအကြံဥာဏ်)
အညိုရောင်သကြား Bacon Smokies ထုပ်
Crock Pot Bourbon ကြက်သား